Harena an-kibon’ny tany: foaran’ny vatosoa sy ny firavaka | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany: foaran’ny vatosoa sy ny firavaka
Hotanterahina, ny 23 ka hatramin’ny 27 oktobra izao, eny amin’ny Mining Business Center Ivato ny foaran’ny vatosoa sy ny firavaka andiany voalohany, karakarain’ny Institut de Gemmologie de Madagascar sy ny BCMM.
Manodidina ny 50 ireo mpandraharaha amin’ny fitrandrahana vatosoa handray anjara amin’ity hetsika ity. Eo koa ireo mpivarotra firavaka sarobidy teratany vahiny sy malagasy mitondra ny vokatra, mandritra io dimy andron’ny foara io.
Fotoana hampahafantarana ny rehetra ny tontolon’ny vatosoa sy ny firavaka eto amintsika io fotoana io, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Ho vita mandritra ny foara ihany koa ny taratasy rehetra mikasika ny fividianana vatosoa fa tsy miandry ela ho an’ireo mpanjifa izany, na ny vahiny na ny Malagasy.
Hisy ny laboratoara hahafahana manao fitiliana ny karazana vatosoa ho an’ireo mpividy mila izany. Hovelabelarina mandritra ny foara ihany koa ny fomba hanarahana ny lalan’ny ireo vatosoa mivezivezy eto an-toerana ary ny tombontsoa azo amin’ny asa fitrandrahana hatao. Ankoatra izany, hisy ny fizarana loka ho an’ireo nandresy tamin’ny fifaninanana fanefena vato izay natao. Entina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny vokatra entin’ny mpandresy.